पलले सुटुक्क रियासासँग गरे विहे, मिडियाको अगाडी यस्तो गरे (हेर्नुहोस भिडियो) – Enepali Samchar
पलले सुटुक्क रियासासँग गरे विहे, मिडियाको अगाडी यस्तो गरे (हेर्नुहोस भिडियो)
March 11, 2021 adminLeaveaComment on पलले सुटुक्क रियासासँग गरे विहे, मिडियाको अगाडी यस्तो गरे (हेर्नुहोस भिडियो)
e nepaalisamchaar /नायक पल शाह र रियासा दाहाल बीच भब्य रुप’मा सुटुक्क बिबाह भएको छ। उनीह’रुको सुटुक्क बिबाह भएको हो।मिडिया पुग्दा पल र रियासा बेहुला बेहुलीको भेषमा देखि:एका थिए ।
सोहि क्रममा पत्रकारले रियास’लाई कस्तो हुदै छ बिबाह भनेर प्रश्न गर्दा उनले यो दोश्रो बिहे हो मेरो भनेपछि पल अकमक्क भए।तर यो सब एक गीतको सुटि’ङ्गको दृश्य रहेको छ डी ए आर मुभिजले निर्माण गरेको एक गीतमा उनीहरु देखिएका थिए।गीतमा पल र रियासाको साच्चै बिबाह होकी भन्ने दे’खिन्छ तर बास्त’बिकता भने बाहिर दे’खाएका छैनन्।
प्रभावन जे र भारतीय गायिकाको आवाज रहेको उक्त गीतमा पल लाइ बेहुला र रियास’लाई बेहुली देखिन्छ। हेरौ बाँकी भिडि’योमै रमाईलो गरौ …
यो दुनियामा विचित्र घटना खोज्न टाढा जानु पर्दैन, छिमेकमै भइरहन्छन् विचित्रका काण्डहरु। हालै छिमेकी मुलु’क भारतको उत्तर’प्रदेशस्थित गोरखपुर जिल्लामा एउटा यस्तै विचित्र’को घ’टना भएको छ।विवाहित महिलाहरु परपुरुषसँग पोइल जाने घटना’हरु यदा’कदा सुनिन्छन्।
आफ्नो लोग्नेलाई छाडेर अर्को पुरुषसँग पोइल जाने कुरा वास्तव’मा कुनै सामान्य कुरा होइन। पोइल जानुका कुनै खास खास हुन्छन्। तर कहिलेकाहीँ एउटा अण्डासमेत पोइल जानुको कारण बन्दो रहेछ।
हो, लोग्नेले अण्डा नल्याइ’दिएको निहुँमा एक’जना महिला पोइल गएकी छिन्। गोरखपुरको क्याम्पिय’रगञ्ज गाउँमा बस्ने ती महिला ४ महिना पहिले पनि प्रेमीसँग भागेर केही दिनपछि घर फर्किएकी थिइन् । तर यो पाला चाहीँ अण्डाको निहुँमा उनले लोग्नेला’ई छाडेर प्रेमीसँग पोइल गएरै छाडिन्।
चार महिनाअघि आफू भागेको त्यो घट’नाका बारेमा पुलिससँग बयान दिने क्रममा ती महिलाले अण्डा खान नपाएकै कार’ण आफू लोग्नेसँग बेखुस भएको खुला’सा गरेकी थिइन्। उनका अनुसार लोग्नेचाहिँले उनलाई अण्डा खान नदिएका कारण उनलाई निकै चित्त दुखेको रहेछ।
गत शनिवार पनि अण्डाकै विष’यमा उनको लोग्नेसँग झगडा पर्यो र घरबाट निस्किन्। उनका प्रेमी पनि आफ्नो घरमा नभए’का कारण उनी प्रेमीसँगै पोइल गएको अनुमान गरिएको छ।
विचरा ती महिलाका पतिले दैनिक मजदूरी गरेर परिवार पाल्दै आएका थिए। त्यसैले परिवारका लागि दिनहुँ अण्डा किनेर ल्याउन नसकेको उनले बताए।आफ्नो यहीँ कमजो’रीको फाइदा उठाउँदै पत्नीको प्रेमी बेला बेलामा अण्डा लिएर आफ्नो घरमा आउने गरेको पनि उनी बताउँछन्। -एजेन्सी
नरिवल तेलको विवादः यसले फाइदा गर्छ कि साँच्चै विषालु हो ? नरिवलको तेल खानु स्वास्थ्यका हिसाबले निकै राम्रो मानिन्छ । तर एउटा नयाँ खोजले नरिवलको तेल खानेहरुको मनमा शंका पैदा गरेको छ ।
सामाजिक अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहिलाई विप्लवको साथ , कसैले जेल हाल्छ भने म लडछु – विप्लव !
प्रचण्डलाइ छोडेर फेरी यी पाँचजना सांसद एमालेमा जाने तयारीमा (हेर्नुहोस् नामावलीसहित)
संसारकै यस्तो अनौठो जोडी : ‘हामी ओछ्यानमा तीनै जना सँगै सुत्छौँ’
युवतीको यो&नीको आकार ओठबाटै यसरि थाहा पाउन सकिन्छ
कुन राशिका महिलालाइ धेरै चाहिन्छ ? (हेर्नुहोस भिडियो)